‘कथा काठमाण्डू’ गीतभन्दा ट्रेलर झन बोल्ड ! | Sagarmatha TVSagarmatha TV ‘कथा काठमाण्डू’ गीतभन्दा ट्रेलर झन बोल्ड ! | Sagarmatha TV
काठमाडौं । असोज १२ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र कथा काठमाडौंले एक पछि अर्को गर्दै बोल्ड सिनहरु दर्शकमाझ पस्किँदै आएको छ । चलचित्रका सार्वजनिक सिनहरुले निर्माण पक्ष आलोचित बनेपछि कथाले मागे अनुसारकै क्यारेक्टर पस्किएको दाबी गर्दै आएको छ । पहिले रातका कुरा त्यसपछि जुन अनि ताराका कुरा सार्वजनिक गरेको निर्माण पक्षले अहिले चलचित्रको ट्रेलरमा पनि उही रातका कुरा भन्दा चर्को ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार फिल्मको एक कार्यक्रमका बीच ट्रेलर सार्वजनिक गरियो । ट्रेलरमा पनि प्रियंका र प्रमोदको इन्टिमेट सिन भरपूर छ । अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँग दुई पटक इन्गेजमेन्ट गरिसकेकी उनलाई गीतले आलोचनाको पात्र बनाइरहँदा ट्रेलरले पनि उम्कन दिने ठाउँ बाँकी राखेको छैन । यो फिल्ममा आयुष्मान पनि लिड रोलमा छन् तर उनको जोडी प्रियंकासँग बाँधिएको छैन । यही फिल्मको सेटबाट उनीहरुले एकअर्कासँग नजिक हुने मौका पाएका थिए । रोचक कुरा त उक्त फिल्मको सुटिङ सकिएपछि दुई पटक कार्यक्रम भयो ।
तर, रियल कपल उपस्थिति भएनन् । गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रियंका अमेरिकामा थिइन् भने आयुष्मान नेपालमै थिए । आइतवार सार्वजनिक गरिएको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा दुवै नेपालमा थिए । तर, उनीहरु दोस्रो पटक पनि आफू अभिनित फिल्मको कार्यक्रममा पुगेनन् । गीतबाट चर्को आलोचना खेपेपछि अहिले प्रियंका ‘कथा काठमाण्डू’ को नाम समेत सुन्न चाहिरहेकी छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने यी अभिनेत्रीले न इन्टाग्राम न त फेसबुकमा नै फिल्मको गीत शेयर गरेकी छन् । गीत त टाढाको कुरा उनले पोस्टर समेत शेयर गरेकी छैनन् । न त आयुष्मानले नै सेयर गरेका छन् । बजार चलचित्रकै कारण उनी टाढा रहेका हुन् भन्ने हल्ला पनि शुरु भइसकेको छ ।
ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रियंका उपस्थित नभएपछि निर्देशक संगीत श्रेष्ठमाथि पत्रकारले अनेकन प्रश्न गरे । उनले फिल्मको विषयमा प्रियंकाले बोल्न नचाहनुको पछाडि मिडिया कारक तत्व रहेको बताइन् । उनले भने, ‘मिडियाले गीतबारे अनेकौं सवाल खडा गरेपछि उनले त्यस विषयमा बोल्नु भनेको एउटा इट्टा थपिनु जस्तै हुने सम्झिएर सायद चुप बसेकी होलिन् ।’ फिल्म साइन गर्दाखेरि नै एउटा कलाकारलाई आफ्नो भूमिकाको विषयमा सम्पूर्ण कुरा जानकारी हुन्छ । आफूले इन्टिमेट सिन दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रियंका फिल्म साइन गर्दा नै स्पष्ट थिइन् । अब गीत बाहिर आएपछि आलोचना भयो भन्दैमा उभानो बस्न खोज्नु कति उचित होला ? कलाकार भएपछि प्रियंका स्वयंले यसलाई राम्ररी बुझेकी होलिन् ।
सञ्चारकर्मी समेत रहेकी संगीताले काठमाडौंको कथालाई चलचित्रमा उतारेको बताउँदै आएकी छिन् । संगीताले नै यो फिल्मको कथा लेखेकी हुन् । विजय राइको निर्माणमा तयार भएको यो फिल्ममा लुजा सिंहको छायांकन छ । ‘कथा काठमाण्डौं’ तीन भिन्नभिन्न कथालाई बुनेर निर्माण गरिएको हो । ‘लष्ट, लभ र लाइभ’लाई उठान गरेको चलचित्रमा अष्ट महर्जनको द्वन्द्व रहेको फिल्मका गीतमा मोहित मुनाल, कमल खत्री, प्रदीप बाँस्तोला र सुरज विक्रम थापाले संगीत भरेका छन् । उक्त फिल्ममा सम्पादनको जिम्मेवारी मित्र गुरुङले सम्हालेका छन् ।
चलचत्रले काठमाडौंमा हुने विभिन्न तीन फरक कथालाई दर्शकमाझ देखाउन खोजेको छ । जसमा रातको कथा पनि एउटा हो । काठमाडौंमा हुने यौन व्यवसायलाई कथा काठाडमौंको एउटा कथाको रुपमा लिएको छ । चलचित्रका सार्वजनि बोल्ड सिन झट्ट हेर्दा निर्माण पक्षले दर्शक बटुल्ने अस्त्र बनाएको देखिए पनि निर्माण पक्षले भने काठमाडौंको एउटा वास्तविकतालाई चलचित्रमा उतारेको दाबी गरिरहेको छ ।
त्यसो त निर्देशक संगीतका अनुसार ‘कथा काठमाडौं’ आम नेपालीको कथा हो । उनले भनिन् ‘यही काठमाडौंमा संघर्ष गर्नेहरुको कथा त भइहाल्यो, त्यो भन्दा पनि गाउँ घरदेखि देश–विदेशमा बस्नेहरुको आफन्तहरु पनि काठमाडौंमा बस्ने भएको हुँदा उनीहरु पनि यस कथामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिन्छन् ।’ आहाना फिल्मको ब्यानरमा बनेको चलचित्रमा गायिका इन्दिरा जोशी पनि विशेष भूमिकामा देखिँदै छिन् ।